भारतमा २ सय किमि प्रति घण्टाको गतिमा आँधी, ८ लाख मानिस सारियो : नेपालमा कहाँ छ असर ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
भारतमा २ सय किमि प्रति घण्टाको गतिमा आँधी, ८ लाख मानिस सारियो : नेपालमा कहाँ छ असर ?
प्रकाशित मिति २० बैशाख २०७६, शुक्रबार ०७:४७ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । भारतको पूर्वीय तटवर्ती क्षेत्रबाट सामुद्रिक आँधी आउन लागेको आशङ्कामा त्यस क्षेत्रका करिब ८ लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थलतर्फ सारिएको छ । सामुद्रिक आँधी २ सय किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आउन लागेको अनुमान मौसमविद्हरुले गरेका सरकारी अधिकारीहरुले बिहीबार जानकारी दिएका छन् ।
भारतको प्रकोप नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरुले एएफपी समाचार समितिलाई उडिसा राज्यको कम्तीमा १३ ओटा जिल्लाका ७ लाख ८० हजार व्यक्तिलाई आँधीले प्रभाव पार्न सक्ने इलाकाबाट सारिएको बताएका छन् । ‘फानी’ नामक यस सामुद्रिक आँधीका कारण शुक्रबार अपराह्नमा हिन्दुहरुको तीर्थस्थल पुरीनजिकै भूस्खलन हुने पनि अनुमान गरिएको छ ।
हाल बङ्गालको खाडीबाट यस समुद्री आँधी झन्डै दुई सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा भारतको ओडिसा राज्यतिर बढिरहेको बताइएको छ । फानीले शुक्रवार जमिनमा प्रहार गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो ओडिसाको तट हुँदै बङ्गलादेशतर्फ लाग्ने बताइएको छ । नेपालको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सो समुद्री आँधी नेपालनजिकै पूर्वोत्तर भारतबाट बङ्गलादेशतिर जाँदा कमजोर हुने भए पनि त्यसको केही प्रभाव नेपालमा पर्न सक्ने बताएको छ ।
करिब एक हजार विद्यालय र सरकारी भवनहरुका १० लाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई शरण दिइएको बताइएको छ । छिमेकमा पर्ने राज्य आन्ध्र प्रदेश र तामिल नाडुलाई पनि यस आँधीले प्रभावित पार्न सक्ने अनुमा गरिएको छ । त्यसैले ती क्षेत्रहरुमा उच्च सर्तकतामा राखिएको छ । भारतको पूर्वी र दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा अप्रिलबाट डिसेम्बरसम्म प्रायः आँधीले सताउने गरेको हुन्छ ।
सन् २०१७ मा तामिल नाडु र केरला राज्यमा आएको सामुद्रिक आँधी ओक्खीले करिब २ सय ५० व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्तै ६ सय व्यक्ति वेपत्ता भएका थिए । गत अक्टोबरमा पनि सामुद्रिक आँधी टिल्लीको कारण ओडिसा राज्यबाट करिब ३ लाख व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको थियो । एएफपी
आधुनिक मानिसहरुले १ लाख वर्षपहिले नै अफ्रिका महादेश छोडेको नयाँ तथ्य, आधुनिक मानवहरुको बसाइसराइबारे खुल्यो नयाँ रहस्य !
अफ्रिका महादेशबाहिर पछिल्लोपटक फेला परेको मानवीय कंकालले पहिले पहिले सोचेभन्दा…
काठमाडौं । चिनी व्यापारीको चक्रव्यूहमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फसेको छ । जसका कारण चिनीको मूल्य उच्च दरले…
बाबा आउने बाटो हेर्दै रवीन्द्रका छोरा
काठमाडौं । दिनभर घरमा शुभेच्छुकको भीड लगिरहँदा स्वराज अधिकारी बार्दलीबाट भीड नियाल्दै थिए । उनी घरी भित्र गएर हजुरआमालाई…
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति संशोधनको लागि समिति गठन
काठमाडाैं । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ संशोधन/परिमार्जनको प्रस्ताव तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको…